के हो जस्टिन बिबरलाई भएको 'रामसे हन्ट सिन्ड्रोम' ? कस्ता हुन्छन् लक्षण ?
काठमाडौँ । हलिवुडका चर्चित पप गायक जस्टिन बिबरले आफ्नो अनुहार पक्षघात भएको खुलासा गरेपछि उनलाई लागेको रोग बारे चासो बढेको छ । २८ वर्षीय गायकले आफुलाई 'रामसे हन्ट सिन्ड्रोम' भएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्- जस्तो देख्न सकिन्छ एउटा आँखा पनि झिम्केको छैन । म मेरो अनुहारको एक छेउमा हाँस्न पनि सक्दिन, त्यसैले मेरो अनुहारको एक पक्ष पूर्ण रूपमा पक्षाघात भएको छ ।' विज्ञहरूभन्छन- रामसे हन्ट सिन्ड्रोम तब हुन्छ जब दाँत (एक प्रकारको डर्मेटाइटिस) को प्रकोपले कान नजिकैको अनुहारको तंत्रिकालाई असर गर्छ ।
बिबरको जस्टिस वर्ल्ड टुरका तीन कार्यक्रमहरू यस हप्ताको सुरुमा स्थगित हुने घोषणा गरिएको थियो ।
'यो भाइरसले मेरो कान र मेरो अनुहारको स्नायुमा आक्रमण गरेको छ र मेरो अनुहार पक्षाघात भएको छ ।' क्यानाडाली गायकले आफ्नो अनुहारको दाहिने तर्फ देखाइएको तीन मिनेटको भिडियोमा भनेका छन् ।
जस्टिनले यस हप्ताको सुरुमा वाशिंगटन र टोरन्टोमा शो गर्ने थियो। यसबाहेक लस एन्जलस र न्युयोर्कमा पनि उनको शो आयोजना हुने थियो ।
यो रोग के हो
अमेरिकाको मेयो क्लिनिकका अनुसार ‘रामसे हन्ट सिन्ड्रोम’ ले अनुहारलाई पक्षाघात गर्ने र कहिलेकाहीँ कानमा पनि असर गर्छ, जसले सुन्न सक्ने क्षमतामा पनि असर गर्छ । मेयो क्लिनिकले रामसे हन्ट सिन्ड्रोमका लक्षणहरू धेरैजसो मानिसहरूमा अस्थायी हुने तर केहीमा स्थायी हुनसक्ने बताएको छ ।
मेयो क्लिनिकले यस सिन्ड्रोमबाट पीडित कतिपयले आफ्नो आँखा झिम्काउन नसक्ने बताएको छ । यसमा धेरै पटक आँखा धमिलो हुने गरेको छ । यसले आँखा दुख्ने समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ । यो ६० वर्षभन्दा माथिका मानिसमा हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यसअघि मार्चमा जस्टिन बिबरकी श्रीमती हेली बिबरको मस्तिष्कमा रगत जमेको कारण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । तर, पछि उनलाई मस्तिष्कघात भएको र मुटुको प्वालबाट निको हुन शल्यक्रिया गरिएको भनिएको थियो ।
मेयो क्लिनिकका अनुसार, रामसे हन्ट सिन्ड्रोम उही भाइरसले गर्दा हुन्छ जसले चिकनपक्स निम्त्याउँछ। चिकनपक्स निको भएपछि पनि यसको भाइरस लामो समयसम्म स्नायुमा रहन्छ । यो वर्षौं पछि पनि सक्रिय हुन सक्छ। र यदि यो सक्रिय भयो भने यसले तपाईंको अनुहारको स्नायुहरूमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।
रामसे हन्ट सिन्ड्रोमका मुख्य लक्षणहरू हुन्-
- कान भित्र र वरपर पिपले भरिएको छाला-जस्तो दाग बन्नु, जसले दुखाइ पनि निम्त्याउँछ ।
- अनुहारको मांसपेशिहरु को कमजोरी वा पक्षाघात ।
- कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन सक्छ कि तपाइँ एकै समयमा पक्षाघात र दागको गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ ।
- कानमा दुखाइ, कान बज्नु, सुन्न नसकिने हुनु ।
- एक आँखा बन्द गर्न गाह्रो
- चक्कर आइरहेको महसुस गर्दै
- सबै चीज बेस्वाद बनाउन
- मुख र आँखामा नमीको कमी
अनुहारमा पक्षाघात भएको वा त्यस्तो दाग देख्ने बित्तिकै तुरुन्तै डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। यदि पहिलो तीन दिन भित्र उपचार प्राप्त भयो भने, यसको दीर्घकालीन प्रभावबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।